निर्वाचन आयोगको निर्णयले दाहाल नेपाल समूह उत्साहित। - Sudurpaschim Online
निर्वाचन आयोगको निर्णयले दाहाल नेपाल समूह उत्साहित।
by सुदूरपश्चिम अनलाइन January 25, 2021
१२ माघ, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा दुबै समूहको दाबीलाई अस्वीकार गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयसँगै प्रचण्ड–माधव समूह उत्साहित देखिएको छ ।
आयोगले पार्टी एकतापछि २३ जेठ २०७५ मा बुझाएको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र विधानलाई मान्छौं भनेको भन्दै आफूहरुले आधिकारिक पाउने नेताहरुले बताए।प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आयोगले स्वीकार गरेको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको ७० प्रतिशत आफूहरुसँग रहेको बताए । सोमबार प्रदेश २ का नेता कार्यकर्तालाई काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उनले निर्वाचन आयोगले आफूलाई अध्यक्ष नमानेपनि केही फरक नपर्ने बताए ।
आयोगले ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र अनुशासनको कारबाही गर्ने पुरानो विधान लागू हुन्छ भनेको भन्दै उनले भने, ‘दुई अध्यक्ष हुनेछ भनेर लेखेको हुनाले घुमिफिरी म आउने नै भएँ ।’
ओलीलाई बहुमत केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्षबाट हटाइसकेको भन्दै उनले अघि भने, ‘केपी ओलीजी केही चान्स छैन तपाईंको । खुरुक्क बालुवाटार छाड्नुस्, आराम गरेर बस्नुस् ।’
उनको भनाइ जस्ताको तस्तै
आयोगको पत्रमा के लेखेको छ भने २०७५ जेठ २३ को विवरण र विधान बाहेक अरु कुनै मानिने छैन । भनेपछि त्यो सडक छाप, धुलोछाप पार्टीको कुनै अर्थ छैन । क्लियर भएन ? उसले सिधै भन्छन्, ४४१ केन्द्रीय सदस्य, ४५ जनाको स्थायी कमिटी । ४५ जनामध्ये २८ जना हामीसँग हुनुहुन्छ । केपीको सानो झुण्डसँग थोरै मान्छे छन् । ४४१ केन्द्रीय कमिटी मध्ये ४३४ जना हुनुहुन्छ । केहीको मृत्यु भयो, केही राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिमा जानुभयो । उनीहरु केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्न । चार जना अरु पार्टीबाट आएकाले (केन्द्रीय सदस्यको कुल संख्या) ४३४ भयो । उनीहरुमध्ये ३०० बढी हामीसँग छन्, ओलीसँग १०० सेरोफेरो छ । कहाँ ३००, कहाँ एक सय ! भनेपछि केपी ओलीसँग एक चौथाइ सेरोफेरोमा छ, हामीसँग ७० प्रतिशतभन्दा धेरै केन्द्रीय सदस्य छन् ।
निर्वाचन आयोगले पत्रमा लेखेको छ, ४४१ लाई आधार मान्छौं । त्यो ४५ लाई आधार मान्छौं । दुई अध्यक्षलाई मान्छौं पनि भनेको छ । (हाँस्दै) माधव नेपाललाई मान्दिन पनि भनेको छ । तर केही भएको छैन । कमरेड प्रचण्डलाई मान्छु भनेपछि उहाँको आधिकारिता रह्यो । केपी ओलीलाई त हामीले हटाइसकेका छौं, केपी ओली समाप्त । केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष पदबाट निकालिसकेपछि … (निर्वाचन आयोगले) अधिकार छ भनेर लेखेको छ । के लेखेको छ भने अनुशासनको कारबाही गर्ने त्यही पुरानो लागू हुनेछ ।
दुई अध्यक्ष हुनेछ भनेर लेखेको हुनाले घुमिफिरी म त आउने नै भएँ (हलमा हाँसो) । केपी ओलीजी केही चान्स छैन तपाईंको । अनेक सेटिङ मिलाउँछु, हाम्रो जित हुन्छ, सूर्य चिन्ह हाम्रै हुन्छ भन्नेको केही अर्थ छैन । खुरुक्क बालुवाटार छाड्नुस्, आराम गरेर बस्नुस् ।
Previous माघ २३ को जनसभा सफल बनाउन समिति गठन, २ लाख जनता उतार्ने ओली समुह को दावी
Next वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा को टिप्पणी प्रमको गोजीमा अर्कै संबिधान।
भारतको राजधानी दिल्लीमा प्रदूषण बढ्दै गएपछि एक हप्ताका लागि स्कुल बन्द
आउँदो मंसिर ३ गते चन्द्रग्रहण, नेपालमा नदेखिने चन्द्रग्रहण कसरी हेर्ने ?
अब नेटफ्लिक्समा रिलिज हुँदैछ सूर्यवंशी
मलाला युसुफजाईको खुलासा उनले कसरी विवाहको बारेमा आफ्नो मन परिवर्तन गरिन